▷ Laptọọpụ kachasị mma nwere LINUX nke 2022, nke ị ga-azụta?
N'adịghị ka nkwenye ndị mmadụ, Ee, ọ ga-ekwe omume ịzụta laptọọpụ Linux, ya bụ, ọ na-abịa na sistemụ arụrụ arụnyere. Nke a bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado Linux na ịchọrọ naanị ka ngwaike gị rụọ ọrụ: ọ bụghị naanị na arụnyere sistemụ arụmọrụ - ị nwere ike tinye ya n'onwe gị n'ime nkeji ole na ole - kamakwa nke ahụ. A ga-akwado Linux nke ọma.
Site n'ịre kọmputa Linux n'ime igbe, ihe onye nrụpụta na-ekwu bụ nke ahụ ha arụla gị ọrụ niile iji hụ na ngwaike na-arụ ọrụ nke ọma na nke ahụ nwere ndị ọkwọ ụgbọala Linux. Ndị na-elekọta nkwado ngwaike gị, yabụ na ha ga-ewere ya nke ọma Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eji sistemụ arụmọrụ ha, ha agaghị enwe mmasị ha agaghịkwa agwa gị na naanị Windows na-arụ ọrụ.
1 Laptọọpụ Linux kacha akwadoro
2 Acer Extensa. Nice Ultrabook nwere Linux
3 Acer Predator Helios. Ihe ka ike
4 Asus ROG 17 sentimita asatọ. Elu njedebe siri ike ịchọta
5 Nhọrọ Chromebook
6 Ịzụta laptọọpụ Linux iji zere nsogbu
7 Kedu ihe kpatara ịzụta laptọọpụ Linux?
8 Otu esi ahazi laptọọpụ na Linux
9 Enwere ike itinye Windows na laptọọpụ na Linux?
10 Ụdị Laptọọpụ Linux kacha mma
Laptọọpụ Linux kacha akwadoro
UAV EDGE2 v2 - Kọmputa ...
O di nwute Laptọọpụ Linux wuru ebumnuche na-efu ntakịrị karịa ndị Windows (mana dịka ị ga-ahụ na ụdị Dell XP n'okpuru). Ọbụna laptọọpụ dị ala, na-enwekarị Intel Celeron processors, bia na obere ego agbakwunyere, ọ bụrụ na ha gụnyere a nkesa Linux. Ihe kpatara na nke ahụ nwere ike dị otú ahụ adịghị mma, ebe ọ bụ na Linux enweghị ụgwọ ikike. Ọ nwere ike ịbụ na laptọọpụ Linux na-atụ aka na a pụrụ iche ahịa, dị njikere ịkwụ ụgwọ karịa, na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ obere mmepụta na-agba ọsọ.
Acer Extensa. Nice Ultrabook nwere Linux
Onwe m, enwere m mmasị na ihe nlereanya a, ana m etinye ya na mbụ dị ka nhọrọ kacha mma, ọ bụghị naanị n'ihi nhazi ya. Nwee a anya ezigbo ihe na-echetara anyị laptọọpụ egwuregwu mana ọ nwere Linux. Laptọọpụ a si ịdị arọ 3kg roughly, o nwere nnọọ ezigbo ngwaike maka ndị ọrụ na-achọ inweta kacha na ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​nwere ike zụta na ọnụ ala dị ọnụ ala, nke dabara ọtụtụ mmefu ego maka laptọọpụ nke njirimara ndị a. Ihe nlereanya nke Acer Ọ na-ekpuchi ụdị dị ka Asus ma ọ bụ Samsung na laptọọpụ Linux a mara mma.
Acer PORTABLE EXTENSA 15 ...
Ihe nhazi ya dị ike Ọ nweghịkwa nsogbu n'ihe gbasara njikọta, ebe ọ na-abịa na ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa na ụdị ọrụ Bluetooth na-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ n'enweghị nsogbu. Ọsọ nke SSD + HDD nke Acer Nitro 5 na-ewetara anyị dị mma nke ukwuu maka ide na ịgụ. Anyị nwekwara afọ abụọ akwụkwọ ikike y Enyemaka Spanish ya na ika a.
Oh na... Ga-emepe na nkeji iri 🙂
Ọ bụrụ na ịchọghị ịma gbasara OS dị ka ịnwe ọmarịcha ultrabook lee ebe a.
Acer Predator Helios. Ihe ka ike
Laptọọpụ ọzọ sitere na ika nwere Linux. Ọ dị ka ụdị ụdị ndị a bụ ndị mbụ tụlere sistemụ arụmọrụ a, otu ihe ahụ mere na akara BQ nwere ekwentị. Mana ịga n'ihu na ahịrị Acer Predator a, enweghị mgbagha pụtara maka ngwaike kedu ihe na-eme ya. Nnwere onwe ya zuru oke mana ọ bụghị ihe dị ịrịba ama, ọ nwere ike iru awa 5 ma ọ bụrụ na ejiri ya na nchapụta ihuenyo nkịtị. N'ogo izugbe o nwere a ezigbo arụmọrụ dị ka ọ dị ike. Ihe anyị na-ahụ na arụmọrụ ya kamakwa na njirimara teknụzụ ya.
Banyere iji ya, anyị nwere ike iji ya kwa ụbọchị ma ọ bụ na-arụ ọrụ, nakwa maka ụmụ akwụkwọ, na-ekiri ihe nkiri na telivishọn na-achọ, ma ọ bụ na-egwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu n'ime video egwuregwu na-achọ ọtụtụ ihe onwunwe na anyị na laptọọpụ, ebe ọ bụ na dị ka anyị kwuru ma ọ bụrụ na ọ daa ntakịrị n'otu aka nke a bụ kaadị ndịna-emeputa, nke ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọjọọ abụghị ihe kachasị ike na ahịa (a Nvidia RTX 3060 6GB). Ihe a na-eme ka ọ nwee a Ọnụ ego dị ọnụ ala karịa maka laptọọpụ egwuregwu, na na ọ bụ otu n'ime nhọrọ ole na ole n'ime mmefu ego nkịtị maka ndị na-atụle laptọọpụ Ubuntu, ma ọ bụ ndị na-achọghị ịmalite ya. Ọ bụrụ na ị laghachi azụ, ihe nlereanya na-abịa na ndị ọkwọ ụgbọala Windows ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye usoro ọzọ.
Asus ROG 17 sentimita asatọ. Elu njedebe siri ike ịchọta
Asus na-akụtu ya site n'inye ndị na-akwado Linux laptọọpụ ha nwere ike ịdị ka nke ha na ya. ROG Strix. Sistemu arụ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ yie ụdị Windows nke pụtara na Jenụwarị., gụnyere ihuenyo otu ibe nke dabara na laptọọpụ inch 17 nke nwere ahụ 15 inch. Mana kama inwe ngwanrọ Microsoft, Asus ROG nwere Linux.
Bụ ọbụna dị ọnụ ala karịa ụdị Windows mgbe ị depụtara nkọwapụta teknụzụ, yana a Ihe nhazi isi i7, a 1080p ihuenyo - nke na-adịghị mma - Nchekwa 16 GB Ram y 1TBGB nke Solid State Nchekwa (SSD).
O di nwute na Amazon Spain enweghi otutu nkeji ma na-ere ya ngwa ngwa, ya mere, oburu na onyinye a adighi, anyi na-akwado gi. rụọ ọrụ ọkwa ???
Nhọrọ nhazi ahụ dịtụ iche, n'agbanyeghị, ka anyị leba anya na ha:
Asus na-enye ụdị Windows dị ọnụ ala na 8GB nke RAM, ihe nlereanya nwere Core i5 processor na nke nwere Ryzen. Na Linux, 8GB nke RAM bụ naanị nhọrọ.
Ịpụ na ụdị Linux dị n'okpuru na-eme ka ị nweta ntakịrị nchekwa na ihuenyo mmetụ nwere mkpebi 3200 × 1800 maka 1200 euro.. Enweghị ụzọ ịchọta ebe etiti, na-edozi naanị maka ihuenyo ma ọ bụ nchekwa, n'adịghị ka ụdị Windows.
Ndị ọrụ Linux nwere ike nweta ụdị Core i7-5500U yana nchekwa 256GB maka $ 900., na ha nwere ike gaa na 512 GB nke nchekwa maka ihe ọzọ. Ndị ọrụ Windows nwere ike nweta naanị nhọrọ 256 na 500 GB, yana naanị site na ụlọ ahịa Microsoft, ebe ọ ga-efu ntakịrị.
Asus ejirila akwụkwọ ndetu Linux egwuri egwu tupu oge eruo, ọbụlagodi wepụta ụdị akwụkwọ ndetu Linux VX5 nke Ubuntu gara aga. Ruo oge ụfọdụ, ọ dị ka ọrụ ahụ ọ na-ada, ma ugbu a ika ahụ na-egosi ntinye aka ka ukwuu na Linux, yana ọtụtụ nhazi VX5 yana ụdị Ubuntu nke ya ka siri ike Sistemụ mkpanaka M3800. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-enyekwa ntụziaka doro anya maka otu esi akwụ ụgwọ nkesa ndị ọzọ Linux, dị ka Fedora ma ọ bụ Debian.
Obere akụkọ: Ọ bụ ezie na ndị ọrụ Linux enweela ike ịwụnye sistemụ arụmọrụ ha na ngwaọrụ Windows ọ bụla, nke ahụ gbagwojuru anya na Windows 10, mgbe. Microsoft gbanwere na UEFI Secure Boot System. Ndị ọrụ ka nwere nhọrọ iji gbanyụọ UEFI na Windows 10, mana nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị n'ihe niile Windows 10 ngwaọrụ, nwere ike ịmepụta isi ọwụwa maka nkesa Linux na-akwadoghị UEFI.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dị mkpa na ndị ọrụ nwere nhọrọ ngwaike na Linux arụnyere site na mmalite. Eziokwu ahụ bụ na enweghị ego Windows ugbu a bụ ọgwụgwọ maka ndị na-akwado Linux.
na Chromebooks Ha bụ kọmpụta nkeonwe na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Google Chrome OS. gbakwunyere, enwere ike ịtụgharị ka ọ bụrụ laptọọpụ Linux dị ọnụ ala dị mfe Chrome OS abụrụlarị Linux desktọpụ agbanweela na interface dị iche, yabụ sistemụ arụmọrụ Chromebook ga-akwado Linux. Ị nwere ike iwunye sistemu desktọpụ Linux ọdịnala n'akụkụ Chrome OS, wee jiri otu ndị ọkwọ ụgbọ ala ngwaike bịa na Chromebook, yabụ. ngwaike kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Ihe ndị ọzọ gbasara Chromebooks na Akụkọ a.
Nsogbu dị na iji Chromebook dị ka Linux PC bụ na emebereghị Chromebook maka ya n'ezie. Ha nwere obere nchekwa ma e mere ha ka ọ bụrụ sistemu dị fechaa nke eji jikọọ na ịntanetị. Ha adịghị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọtụtụ sistemụ mebere ma chịkọta faịlụ koodu n'otu oge. Bụlagodi, dị ọnụ ala karịa kọmpụta ndị a raara nye sistemụ Linux. Ọ bụrụ na ịchọrọ naanị obere ngwaọrụ dị ọnụ ala nke ị ga-eji Ubuntu, Chromebook nwere ike ịbụ ihe ịchọrọ.
Ịzụta laptọọpụ Linux iji zere nsogbu
Maka ndị nke bi n'okpuru nkume n'afọ gara aga, ndị Microsoft ewepụtala obere aghụghọ na-agwa ndị na-emepụta kọmputa na, iji nweta Windows 10 asambodo, ha ga-achọ ịgbalite Sistemụ Boot Secure. na ngwaọrụ gị. .
Iji wụnye Linux ị ga-abanye na ya Ntọala UEFI ma gbanyụọ Secure Boot, tupu ị wụnye nkesa nke nhọrọ gị. Usoro a emeela ọbụna siri ike maka onye ọrụ nkịtị ị chọrọ iji Linux.
Ụfọdụ nwere ike ghara ọbụna nwalee Linux n'ihi na ha na-arụ ọrụ agnostic. Ụfọdụ na-eji Windows eme ihe naanị n'ihi na ọ bịara na kọmpụta ha zụtara arụnyere, na echiche dị mfe nke ịwụnye sistemụ arụmọrụ ọzọ erubeghị ha n'obi.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale Linux mana enweghị obi ike iji wụnye ya n'onwe gị?
Ihe mbụ ị nwere ike ime bụ ibudata nkesa na ọkụ ya na DVD. Ọ bụrụ na ịmaghị n'aka ụdị Linux ị ga-ahọrọ, gbalịa ịchọta ndepụta nkesa ewu ewu nwere ike ịbara gị uru, ma ọ bụ ọbụna nwaa ole na ole.
Ndị ọrụ Linux ọhụrụ ka ga-adị nchebe karịa ịnwale nkesa kachasị ewu ewu dị ka Ubuntu ma ọ bụ Mint Linux, na, maka ndị ọrụ Windows, a ga-enwe Zorin mgbe niile.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ihe kwere nghọta na echiche nke nbudata nkesa na iṅomi ya na diski ma ọ bụ USB nwere ike ịkagbu ụfọdụ. Mana nke ahụ abụghị ihe kpatara ịwepụ Linux. Nhọrọ ọzọ bụ ụlọ ọrụ na-enye gị ohere ịzụta ụdị nkesa Linux na DVD ma ọ bụ USB.. Na, dị ka anyị kwuru, ị nwekwara ike zụta laptọọpụ na-eji Linux arụnyere na mbụ.
Kedu ihe kpatara ịzụta laptọọpụ Linux?
Ọ bụrụ na ị na-aṅa ntị na ọnụ ọgụgụ nke ahịa sistemụ arụmọrụ desktọpụ, ị ga-ama nke ahụ Linux dị na 1%, ọ dịghịkwa ka ọ si ebe ahụ pụọ.
Nke ahụ bụ enweghị atụ dị egwu, n'ezie, n'ihi na eziokwu na Linux bụ n'efu. N'adịghị ka Microsoft, dịka ọmụmaatụ, nke na-edobe akaụntụ nke ọma nke ụdị ọ bụla Windows na-ekesa, Linux enweghị ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa; ndị ọrụ na-ebudata, kesaa ma nwee ọ enjoyụ na isi mmalite sistemu arụ ọrụ ha ka afọ ju ha na-enweghị nlebanya gọọmentị ọ bụla.
Site n'echiche ọrụ, nke na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu maka ndị ọrụ. Nsogbu a bụ, nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe maka ndị na-ere ngwaike na ngwanrọ, ndị na-anya ụgbọ ala, na ndị nkatọ ụdị ọ bụla iji wedata Linux site n'echiche ahịa. Nke ahụ, n'aka nke ya, na-eme ya O yikarịghị ka a ga-emegharị ngwanrọ ọhụrụ maka Linux, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na a ga-emepụta ndị isi ọkwọ ụgbọala maka sistemụ arụmọrụ ahụ; na nkenke, na na-ebelata uto nke Linux.
Kedu ihe a ga-eme iji dozie ya? Ọ bụrụ na ijiri Linux, ị nwere ike ime ka amara ya na netwọkụ. Enwere ibe nwere counter "Anyị karịrị 1%" nke Linux, dị ka DudaLibre, nke na-egosi na a na-eji sistemụ arụmọrụ eme ihe karịa nyocha ọkọlọtọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inye aka gosipụta uru ahịa nke Linux, oge ọzọ ị nọ n'ahịa ma na-achọ ngwaọrụ ọhụrụ maka azụmahịa gị ma ọ bụ ọrụ nkeonwe gị, zụta nkesa etinyegoro mbụ. Ọ bụghị naanị na ọ ga-azọpụta gị site na ịwụnye ya, ma ị ga-ejide n'aka na ọ na-arụ ọrụ, na nkwado ma ọ bụrụ na ihe omume na-atụghị anya ya. Ọbụna nke ka mma, ịzụrụ gị ga-etinye na data ahịa nke ọmụmụ ihe na-esote, ebe ọ bụ na onye na-ere ahịa ga-eme akaụntụ, na ị ga-enyere aka ezigbo sistemụ arụmọrụ ka amara ya dịka o kwesịrị.
Otu esi ahazi laptọọpụ na Linux
Ịhazi laptọọpụ na Linux bụ ọrụ dị mfe maka ndị ọrụ dị elu, mana ọ nwere ike ọ gaghị adị mfe maka ndị ọrụ ọhụrụ. Iji nweta nke a, anyị ga-esorịrị usoro ndị a:
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịnweta ISO nke sistemụ arụmọrụ achọrọ. Anyị nwere ike họrọ otu sistemụ arụnyere na ndabara ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Ọzọ, anyị ga-emepụta ihe a maara dị ka LiveUSB, ya bụ, eriri USB ma ọ bụ nke anyị nwere ike ịnwale sistemụ arụmọrụ n'enweghị ihe ize ndụ nke imebi nrụnye ala anyị. Maka nke a anyị nwere ike iji ngwaọrụ ndị dị ka UNetBootin ma ọ bụ ngwá ọrụ dị ka Startup Disk Creator, nke abụọ dị na ebe nchekwa ọrụ nke ọtụtụ nkesa Linux na nke akwadoro. Ọ bụrụ na anyị si na Windows mee ya, anyị nwere ike iji ngwaọrụ dịka Rufus.
Na nzọụkwụ ọzọ, anyị ga-etinye pendrive anyị n'ọdụ ụgbọ mmiri USB. Ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike hazie ya na ngwá ọrụ dị ka GParted.
Anyị na-emeghe software anyị na-ahọrọ ịmepụta LiveUSB. Usoro ndị a na-akọwa otu esi eme ya na mmalite Disk Creator.
Na ngalaba dị n'elu, anyị na-ahọrọ ISO iji wụnye. N'okpuru otu, ebe a na-aga pendrive.
Anyị na-pịa "Mee diski mmalite", ma ọ bụ "Mepụta diski mmalite" ma ọ bụrụ na ị nwere ya na Spanish.
Anyị na-echere ka usoro ahụ gwụ, nke ga-ewe nkeji ole na ole.
Ọzọ, anyị na-amalitegharị kọmputa ahụ wee malite na USB. Ọ bụrụ na ọ maliteghị ozugbo site na pendrive anyị, anyị ga-amalitegharị ọzọ wee pịa igodo ọrụ (Fn) F12 ka ịhọrọ draịva buut. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, anyị na-abanye na BIOS ma gbanwee usoro buut nke mere na USB dị n'ihu diski ike (Floppy).
Ugbu a ọ dị naanị ịwụnye sistemụ arụmọrụ. Ihe anyị ga-ahụ na ihuenyo ga-adabere n'ụdị installer, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ dị ka Ubiquity (nke Ubuntu na-eji) ma ọ bụ Calamares. N'ụzọ bụ isi, anyị ga-ahọrọ asụsụ, na-egosi ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ wụnye ndị ọzọ software, họrọ ụdị echichi, n'ime nke anyị nwere ohere iji dum disk ma ọ bụ mepụta partitions, họrọ obodo, aha njirimara na paswọọdụ na. chere.
N'ikpeazụ, mgbe a jụrụ anyị, anyị na-amalitegharị kọmputa ahụ, na-echefughị ​​iwepụ pendrive ka ọ ghara ịmalite na ya ọzọ.
Enwere ike itinye Windows na laptọọpụ na Linux?
N'ezie Ọ bụrụ na ọ kwe omume. Na, karịsịa kemgbe mmalite nke Windows 8, sistemụ arụmọrụ na-etinye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa site na mmelite ngwanrọ na ngwaike niile kwesịrị ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ tiori. Na omume, anyị nwere ike ịhụ na e nwere ọdụ ụgbọ mmiri na-adịghị arụ ọrụ dị ka anyị na-atụ anya, ịbụ onye na-akpata kasị nsogbu na HDMI; Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na mgbe etinyere sistemụ arụmọrụ dị iche na nke sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yana ngwanrọ ya na ndị ọkwọ ụgbọ ala ya na ndabara, anyị enweghị ike ijikọ laptọọpụ anyị na ihe nleba anya mpụga n'ụzọ dị otú a.
Usoro ime ya ga-adịgasị iche dabere na laptọọpụ anyị nwere, mana ọ bụ isi dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye BIOS ma gbanwee ụdị interface (UEFI, EFI, Legacy, wdg).
Anyị na-ewebata DVD anyị na Windows. Nhọrọ ọzọ bụ ịmepụta USB nrụnye, nke anyị nwere ike iji ngwaọrụ ndị dị ka Rufus o Wintoflash.
Anyị na-amalite site na ngalaba ntinye anyị. A na-ahazi kọmpụta ka ọ buru ụzọ buo na DVD na mgbe ahụ site na draịvụ ike, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụnye Windows na DVD, ọ kwesịrị buut ozugbo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụnye usoro site na USB, site na BIOS anyị ga-agbanwe usoro buut. Enwekwara laptọọpụ na-enye anyị ohere ịhọrọ ebe anyị ga-amalite ma anyị gbanye kọmputa site na ịpị igodo ọrụ, dị ka (Fn) F12.
Na ngalaba nke ụdị nrụnye, anyị na-ahọrọ nhọrọ "Ihe ọzọ" ma hichapụ akụkụ niile na draịvụ ike. Ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị na-emepụta ndị dị mkpa partitions.
Anyị na-amalite echichi ma soro ntuziaka na-egosi na ihuenyo.
Ozugbo echichi ahụ mechara, ọ dị mkpa ịlele maka mmelite, ebe ọ bụ na a ga-etinye ndị ọkwọ ụgbọala maka akụrụngwa anyị n'ebe ahụ.
Ụdị Laptọọpụ Linux kacha mma
Slimbook bụ ụlọ ọrụ jisiri ike nweta ọtụtụ ewu ewu maka ịnye kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ Linux arụnyere na ndabara. Mana, n'adịghị ka ụdị ụdị ndị ọzọ na-enye, Slimbook nwere ụdị kọmpụta dị iche iche na katalọgụ ya, dị ka ụfọdụ dị ike maka ndị mmepe ma ọ bụ ndị ọkachamara na ndị ọzọ nwere ihe ndị nwere ọgụgụ isi karịa maka iji ụlọ. Otu ha ha na-enyekarị nhazi dị mma, ya mere ọ bara uru iburu ha n'uche ma ọ bụrụ na anyị na-achọ kọmputa nwere Linux ihe ọ bụla anyị chọrọ.
System76 bụ akara dị mkpa na ụwa Linux, n'otu akụkụ n'ihi na ha na-enye anyị sistemụ arụmọrụ nke ha: na Pop! _OS dabere na Ubuntu. Na mgbakwunye, ọ na-emekwa ma na-ere ezigbo laptọọpụ, ha niile nwere ihe ndị nwere ọkara na-aga n'ihu yana ọtụtụ n'ime ha nwere sistemụ arụmọrụ Linux. N'ime katalọgụ ha, anyị ga-ahụ ụdị kọmputa dị iche iche, dị ka kọmpụta, laptọọpụ na mini, na ha na-ahụ maka ngwa ngwa dị mkpa dị ka. Onye njikwa ngwa nke ga-achọta ma wụnye ngwa ngwa ọ bụla maka akụrụngwa anyị.
Vant bụ ụdị kọmputa ọzọ kpebiri nzọ na Linux. Ihe kachasị na katalọgụ ya bụ kọmputa nwere a Ubuntu LTS arụnyere na ndabara ma, mgbe ụfọdụ, ha na-enye anyị ohere nke gụnyere ọhụrụ version nke sistemụ. N'adịghị ka ụdị ndị ọzọ na-enye naanị kọmputa Linux nwere ihe ndị dị elu, Vant na-enyekwa ngwá ọrụ dị akọ karị, ya mere ọ bara uru iburu ha n'uche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta kọmputa Linux n'agbanyeghị ihe anyị ga-eji mee ya.
Tuxedo bụ akara ama ama na Linux maka imepụta na ire kọmpụta nwere sistemụ kernel Linus Torvalds. N'ime katalọgụ ya anyị na-ahụ ụdị kọmputa niile, mana ọtụtụ gụnyere elu components ma ọ bụ na e bu n'uche ndị mmepe mere ha. Ha na-adịbeghị anya mara ọkwa Etumatu Kubuntu, Kọmputa emebere n'akụkụ ya na ndị mmepe Kubuntu iji nye ahụmịhe ọrụ kachasị mma mgbe ị na-arụ ọrụ na ụdị KDE nke sistemụ arụmọrụ Canonical.
Maka ndị ọrụ Linux, enwere ọtụtụ kọmpụta ndị na-abịa na arụnyere sistemụ arụmọrụ masịrị gị. Nke ahụ pụtara ọ dịghị mkpa ka ị na-aga ịchụ nta ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ maka gị ma ọ bụ na-akpakọrịta na kọmputa gị ntọala, ị nwere ike zụta akwụkwọ ndetu na Linux etinyegoro na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị n'ime gị chọrọ ịnọgide na-etinye Linux n'onwe gị, Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ Ubuntu gbaara agbaziri mgbe niile. Ubuntu nwere ndepụta kọmputa niile, gụnyere laptọọpụ, ndị natara nzere"Asambodo Ubuntu", nke pụtara na ha nwere ike iji Linux na-enweghị igbanwe ha.
Maka ndị nke chọrọ sistemụ arụmọrụ abụọ, a na m atụ aro ka ị mụta ka esi eji na wụnye Windows 8 dual boot system na Linux. Ya mere, a ga-atụ anya na ị ga-enwe nsogbu ịnwale ya n'ihi Boot Secure. Ikekwe ọ ga-aka mma ịmụ ka esi etinye Linux na kọmputa Windows 8.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Laptọọpụ Linux. Kedu nke a ga-azụta?
1 kwuru na "Laptop Linux. Kedu nke a ga-azụta?
Ọktoba 2017-06 na elekere 01:8 nke ụtụtụ
Ihe niile m gụrụ na-atọ ụtọ ma baa uru nke ukwuu.
Daalụ nke ukwuu maka ikesa ozi bara uru dị otú ahụ.